यि चितवनकी सरकारी जागिरे शारदाले, एकैचोटि कति जनासँग बिहे गर्न सकेकी नानी ! – Classic Khabar
त्यही कारण भीमलाल पोखराको एउटा गाउँमा बस्छन्, एक्लै । छोराहरू मुख राम्रोसँग खोलेर बोल्दैनन् । उता एक जना होइन, दुई जना होइन, पुरुषका घरबार र जिन्दगीसँग खेलेर उनीहरूलाई धर्धरी रुने बनाएर अनमीको जागिर खाँदै छिन् कल्पना । यस्तामाथि कडाभन्दा कडा कारबाही होस् । अरु समयमा महिला र पुरुष समान भन्ने अनि कारवाहीको मामलामा पुरुषलाई एउटा कानुन आकर्षित हुने, महिलालाई अर्को कानुन लाग्ने नहोस् । बहुविवाह गर्नेमाथि कडा कारबाही होस् । (भीमलालको साथी विनोद पुडासैनी, पोखरा, हामीले जनआस्थाबाट साभार गरेको)
Prevआफ्नै ज्यान जोखिममा राखेर कोरोनाको बिरामीको उपचार गर्ने नर्स र डाक्टरको ज्यान लिन खोज्ने को हो ?
Nextउज्वलको परिवारले अस्वीकार गर्‍यो दुर्गा प्रसाईंको सहयोग